Kilaovalo-Ambohibary Sambaina : Trano 35 tafo kilan’ny afo tanteraka
samedi, 01 août 2015 09:19
Trano hazo miisa 35 no ravan’ny afo tanteraka tao Kianjasoa-Kilaovalo Atsimondampa, 18 km miala ao Ambohibary-Sambaina manaraka ny lalam-pirenena faha-43 miazo an’i Faratsiho. Entam-barotra, vola, vokatra ary entana sy kojakoja maro no lasa lavenona ary fianakaviana am-polony no traboina tamin’izany.
Tsy fantatra mazava ny mety nipoiran’ny afo na misy milaza aza fa nivoaka avy tao amin’ireo mpanao mofo sy kafe tao afovoan-tsena izay miasa amin’ny alina no mety niavian’izany. Ny afo efa niredareda ka niitatra tamin’ireo trano manodidina no nanaitra ny olona.
Ravan’ny afo tanteraka ny trano fonenan’ny fianakaviana maherin’ny folo izay sady nivarotra no nonina tamin’ireo trano ireo ka tsy manan-kialofana noho izany ka any amin’ireo mpiara-monina sy fianakaviana aloha hatreto no mipetraka.
Nampanantena ny hijery akaiky ny zava-misy any an-toerana ny Birao nasionaly misahana ny fitantanana ny loza voajanahary taorian’ny tatitra natao tany amin’izy ireo.